I-Raw RAD140 powder (i-1182367-47-0) Abenzi Nabahlinzeki - Amafektri
I-RAD140 powder emifushane (1182367-47-0)
I-RAD140 powder ibhekwa njengenye yezakhiwo ezinhle kakhulu zokwakha amaSARM ngaphandle lapho. Into enkulu ngeSARMS yilelo ......
SKU: 1182367-47-0 Isigaba: Uchungechunge lweSarm
I-RAD140 powder emfushane (1182367-47-0) ividiyo
I-RAD140 powder emifushane (1182367-47-0) Incazelo
I-RAD140 powder eyaziwa ngokuthi i-Testolone (i-Raw RAD140 powder), i-androgen receptor modulator (SARM) ekhethiwe eyenziwa yinkampani yezokwelapha i-Radius yokwelashwa komdlavuza wesifuba nokushaywa kwemisipha kubesifazane be-postmenopausal. I-Testolone intsha kakhulu emakethe yezohwebo nokutholakala kwayo kokuqala ku-2010.
I-RAD140 i-powder eyimifino njengendlela ye-androgen receptor modulator (SARM) engeyona ye-nonsteroidal. Ivuselela ama-androgen receptors ethambo kanye nemisipha enobudlelwane obukhulu kunezitho zokuzala. I-RAD140 powder emifula iye yathola ukuthandwa phakathi kwabalimi bomzimba nabagijimi abafuna ukwandisa isisindo somzimba.
I-RAD140 powder emifushane (1182367-47-0) Siziqu
Igama Product I-RAD140 epholile
Igama leKhemikhali 2-Chloro-4-(((1R,2S)-1-(5-(4-cyanophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl)-2-hydroxypropyl)amino)-3-methylbenzonitrile
Brand NAme I-Testolone
I-Drug Class i-androgen receptor modulator (i-SARM)
CAS Inombolo 1182367-47-0
I-molecular Fi-ormula C20H16ClN5O2
I-molecular Weziyisishiyagalombili I-393.831 g / mol
IMisa ye-Monoisotopic I-393.099 g / mol
solubility Umswakama wamanzi 0.153 mg / mL
Storage Tukushisa Gcina ekamelweni lokushisa
I-RAD140 i-powder A ewodwaukuphikisana I-RAD140 i-powder emifushane iyisimo se-androgen receptor modulator (SARM) esetshenziselwa ukuphenyisisa ekwelapheni izimo ezifana nokushaywa kwemisipha nomdlavuza webele.
Umshwana omkhulu RAD140 powder (1182367-47-0) Incazelo
U-RAD140, owaziwa ngokuthi i-Testolone uvame ukubizwa ngokuthi i-SARM enamandla kakhulu. Kusacwaningwa yinkampani yezokwelapha ebizwa ngokuthi iRadious Health.
I-Selective Androgen Receptor Modulators (ama-SARM) yilokho okubhekwa kakhulu ukuthi kuyindlela ephephile kuma-steroids.
Yini eyenza ukuba ikhetheke kangaka?
Yebo, la ma-SAR akhethile kukho konke abakwenzayo. Ngokubopha ama-receptor we-androgen ngendlela ekhethiwe, uzothola izinzuzo ngaphandle kokukhathazeka ngemiphumela emibi.
Izindlela ezivela kulezi zinhlanganisela zihluke kakhulu kunezingqinamba eziningi zokusebenza.
Ama-SAR afana ne-Testolone (i-RAD140) aneemiphumela emibi kakhulu uma kuqhathaniswa ne-steroids yingakho ajwayele ukusetshenziswa ngama-bodybuilders.
Abasebenzisi abaningi bathi le modulator ye-androgen receptor (SARM) ekhethiwe iyinto esondelene kakhulu ne-steroids. Lokhu kusho ukuthi ungalindela ukwanda okukhulu kobuhlungu obukhulu bomzimba namandla. Ungaphinde ulahlekelwe amanye amafutha ngenkathi ukwakhiwa kwemisipha, okushiwo abanye ukuthi akunakwenzeka.
Ngenxa yokuthi le SAR iqinile kakhulu, ungalindela imiphumela embi kakhulu. Ngenxa yokuthi inezinhlangothi eziphezulu ezibophezelayo nezihambeli ze-androgen, le nhlanganisela ibhekwa njengenye yezinamandla kakhulu.
Ukuze ubeke izinto ngendlela efanele, i-RAD140 powder eluhlaza ine-anabolic: isilinganiso se-androgenic se-80: 1.
Amakhemikhali ane-high anabolic ratio ayaziwa ukuthi abakhi bezimpahla ezinhle. Ungakwazi ukubeka kalula ama-10lbs we-mass muscle obukhulu uma ucwaninga ngale SARM.
I-RAD140 powder emifushane (1182367-47-0) Indlela Yokusebenza
I-RAD140 isebenza ngokukhetha ngokukhetha i-androgen receptors emzimbeni. Ihlose i-receptors emisipha nasetheni futhi ayinandaba nakancane ezingxenyeni zokuzala.
Ikhono lokukhetha lama-SAR aliqondi kahle okwamanje. Kungenzeka ukuthi basebenza ngokukhetha ukusebenza kwamaprotheni ahlukile kune-testosterone. Lokhu kubangela kuphela amamukeli athile a-androgen-ikakhulukazi emisipha-esebenzayo, ngenkathi evikela abanye.
Isakhiwo se-RAD140 sihluke kakhulu nesakhiwo sama-hormone e-steroid njenge testosterone. Lokhu kusho ukuthi umzimba awukwazi ukuguqula i-RAD140 i-powder eluhlaza ibe amanye ama-hormone njenge-estrogen engase ibe nemiphumela engathandeki.
Le nhlanganisela iphinde ivuselele ukukhula kwemisipha ngokugqugquzela ukuthuthukiswa kwama cell muscle kanye namaprotheni.
Ngokususelwa ekutadisheni kwamagundane, i-RAD140 i-powder eluhlaza isebenza ngama-receipt ezindaweni ezibuchopho ezimele. Lokhu kubangela isignali ebizwa ngokuthi i-MAPK endleleni esiza ukuvikela amaseli.
Izinzuzo we-RAD140 powder ephezulu (1182367-47-0)
◆ Ukwandisa iMiscle Mass
I-RAD140 ithandwa emphakathini wokuqinisa umzimba ngenxa yemisindo yokwakha imisipha. Njengamanye ama-SARM, linikeza indlela yokwandisa ukukhula kwemisipha ngaphandle kwemiphumela engafuneki ye-steroids evamile.
Naphezu kwalokhu kudumile, ubufakazi besayensi ngemuva kwe-RAD140 powder obuluhlaza bukhawulelwe kakhulu.
Njengamanje, kunesifundo esisodwa kuphela sezindiza esihlola umphumela we-RAD140 ekukhuleni kwemisipha. Esicwaningweni, abacwaningi bahlola ukulinganisa okuhlukene emininini ye-9. Bathole ukuthi i-RAD140 ikhulisa ubunzima bomzimba obuqinile ngemva kwezinsuku ze-28 kuphela zokusetshenziswa.
Izifundo zabantu ze-RAD140 azange zenziwe okwamanje. Kodwa-ke, ukuhlolwa komtholampilo we-SARM ebizwa ngokuthi i-Ostarine ithole ukuthi kuthuthukisa ukuqina komzimba nokusebenza komuntu asebekhulile.
◆ Umdlavuza webele
I-RAD140 ibonisa imiphumela ethembisayo yomdlavuza webele.
Ifomu elivamile lomdlavuza webele elibizwa ngokuthi i-androgen ne-estrogen receptor positive (AR / ER +) ibuhlungu kuma-hormone. Imithi ethinta lezi receptors, njenge-SARM, ingaba namandla okulwa nomdlavuza.
Esikhathini sokutadisha kweselula, i-RAD140 powder eluhlaza yemise ukukhula kwamangqamuzana omdlavuza webele we-AR / ER + ngokuvimbela imiphumela ye-estrogen.
Ngokuqondile, i-RAD140 ibonakala icindezela isakhi se-ESR1. Leli gciwane libhekene nokudala ama-estrogen receptors. Ngaphandle kwe-receptors eyanele, i-estrogen ingashiywa amandla futhi ingasebenzi.
◆ Imiphumela yeBongo
U-Androgens naye udlala indima ebalulekile ekuvikeleni ubuchopho. Bangakwazi ukwandisa ubuchopho beselula, ukukhumbuza inkumbulo, nokunciphisa ukuqoqwa kwe-amyloid beta. Ama-protein ase-Amyloid beta akholelwa ukuthi iyimbangela enkulu yesifo se-Alzheimer's.
Ekucwaningweni kwamagundane, ama-RAD140 avikelekile ukuvimbela ukulimala kwe-amyloid beta. Ukwengeza, i-RAD140 ne-testosterone babesebenzayo ngokufanayo ekuvikeleni ama-neurotoxin.
Ngokuthakazelisayo, abanye abasebenzisi be-RAD140 babika ukulala okungcono, kodwa azikho izifundo zokubuyisela emuva lokhu. I-Same iya embikweni wekhono layo lokuthuthukisa ukusebenza kocansi-nakuba lokhu kungase kuhlotshaniswe nemiphumela ye-testosterone.
◆ Ukulahlekelwa Isisindo
Ama-SAR ayaziwa okwandisa ubukhulu bemisipha kanti futhi anciphisa amanoni omzimba.
Ukutadisha okulodwa kuphela ezinkenyeni kubheka imiphumela ka-RAD140 kumisipha namafutha. Nakuba yanda imisipha eminyene, umphumela wamafutha omzimba wawungacacile.
Kodwa-ke, isifundo sithole ukuthi i-RAD140 ithuthukisa amazinga e-cholesterol. Ngaphezu kwalokho, isisindo somzimba ophakeme singakhuphula ukusetshenziswa kwamandla ukuthuthukisa ukulahlekelwa kwamafutha.
Kunconywe i-RAD140 powder ephakanyisiwe (1182367-47-0) Isilinganiso
Abasebenzisi abaningi abedluli i-20mg ngosuku. I-SARM enamandla kakhulu ngakho asikho isidingo sokuthatha okungaphezu kokunconywa.
Iningi lemijikelezo ene-RAD140 eluhlaza obomvu izohlala kuphi kusukela ku-6 kuya kumaviki angu-8. Kanti, abacwaningi abanolwazi bangase bakhiphe lokhu kumaviki e-10.
Okuqhamuka uma udla imishanguzo we-RAD140 powder ephezulu (1182367-47-0)
I-RAD140 yinto entsha yokuphenya. Ukuphepha kwalo nemiphumela emibi akukahlolwa okwamanje emitholampilo.
Ngokususelwa ekusebenzeni kwama-SAR, i-RAD140 kufanele ibangele imiphumela embalwa engadingeki kune-testosterone. Lokho kusho ukuthi i-RAD140 isenamandla okwenza imiphumela emibi ehlobene ne-testosterone. Lokhu kungafaka:
Ububele besisu / ukukhula emadodeni
Izinwele zomzimba ezingavamile ukukhula kwabesifazane
Izinguquko ku-sex drive
Ukukhishwa kwephethini yamadoda / ukulahlekelwa izinwele
Umoya uguquka nokukhathazeka / ukucindezeleka
Ama-Bodybuilders avame ukubika ukulahleka kwezinwele njengempembelelo yecala, eguqulelwe uma beyeka ukuthatha i-RAD140.
I-RAD140 (Testolone): Ukubukeza & Sebenzisa & Izingozi
I-Pier Giorgio Righetti; '' I-Capillary Electrophoresis ku-Analytical Biotechnology: Ukulinganisela Kwezingqinamba ''
UJohn J. Qu, Wei Gao, iMenas Kafatos, uRobert E. Murphy, uVincent V. Salomonson; '' Isayensi Yezwe Lomhlaba Ukubukela Ukude Kwedlula: I-Vol.1: Isayensi Nezinsimbi ''
Ngama-American Association for Research Cancer; '' I-AACR 2017 Proceedings: Izinhlamvu ze-3063-5947 ''
I-SR9009 powder enkulu (1379686-30-2)
I-SR9009 i-powder ejwayelekile idluliselwa ngokuthi i-Stenabolic futhi ngokuyisisekelo imithi yokwenziwa eyenziwe ngenhloso ye ......
Umthamo: 1240kg / inyanga
I-Raw S-23 powder (1010396-29-8)
I-S-23 powder iyisimo se-bioavailable yomlomo, esingenayo i-androgen receptor modulator (SARM) ekhonjisiwe ukuthi isandise ukwandisa ......
Umthamo: 1360kg / inyanga
I-Raw Endurobol powder nayo yaziwa nangokuthi i-GW-501516, abanye abantu bangase babhekisele kuso njengeCararine. Ngenxa ye-Endurobol ene-.......
I-Raw S4 powder (401900-40-1)
I-S4 powder, eyaziwa nangokuthi i-Andarine, i-modulator ye-androgen receptor (SARM) ekhethiwe. I-S4 SARM ibhekwa njengenye ye ..........